M/weyne Siilaanyo oo ka tacsiyeeyey geerida Alle ha u naxariistee C/llahi Yusuf Axmed. – Radio Daljir
M/weyne Siilaanyo oo ka tacsiyeeyey geerida Alle ha u naxariistee C/llahi Yusuf Axmed.
Hargeysa, Mar 23 – Dhambaal tacsi ah oo ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa tacsi loogu diray eheleda, qaraabada, asxaabta iyo shacabka Somaliyeed geerida Alle ha u naxariistee C/llahi Yusuf Axmed, M/weynihii hore ee Somaliya.
Dhamaablka ayaa u dhignaa sidan:
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) isaga oo ka tiiranyeysan, waxa uu tacsi u dirayaa Ehelkii, Qaraabadii, Asxaabtii, iyo guud ahaan shacbiga Soomaaliya ee uu ka baxay Madaxweynihii hore ee Somaliya MARXUUM CABDILAAHI YUUSUF AXMED.
MARXUUMKA oo ku geeriyooday imaaraadka Carabta gaar ahaan Abu-Dubai 23/03/2012.
Madaxwaynuhu waxa uu ILLAAHAY uga baryayaa Marxuumka inuu naxariistii Janno ka waraabiyo, Qoyskii, Eheladii, Qaraabadii, Asxaabtii iyo guud ahaan shacbiga soomaaliya ee uu ka baxayna Samir iyo Imaan ka siiyo.